Seeneetiin Ameerikaa karoora Traamp meeshaa waraanaa Sa’uudii fi Emreetitti gurguruuf baase uggure - NuuralHudaa
Seeneetiin Ameerikaa karoora Traamp meeshaa waraanaa Sa’uudii fi Emreetitti gurguruuf baase uggure
Prezdaant Traamp hayyama Seeneetii Ameerikaatiin alatti meeshaa waraanaa Dolaara biiliyoona 8tti shallagamu Sa’uudii gurguruuf karoorfatee ture. Prezdaant Traamp gurgurtaan meeshaa waraanaa kun qophii waraanaa Iiraan naannichatti godhaa jirtu waliin kan wal qabatu tahuu ibsuun, murtii Seeneetii malee seeraa yeroo muddamaatti fayyadamuun ajaja isaa qofaan dabarsuuf yaalee ture.
Haata’u malee miseensonni Seeneetii Ameerikaa heddu murtii Traamp kana mormuun koroora kana guyyaa har’aa mana mareetti dhiheessanii sagalee irratti kennan. Haaluma kanaan sagalee caalmaa taheen karoora prezdaantichaa kan ugguran tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Haaluma wal fakkaatuun karoorri bulchiinsi Traamp meeshaa waraanaa Emreetiif gurguruuf baase ugguramee jira.
Miseensonni Seeneetii Ameerikaa akka jedhanitti, Sa’uudiin meeshaa waraanaa kana Iiraan ofirraa ittisuuf osoo hin taane, lola Yaman keessatti geggeessaa jirtu irratti fayyadamuu malti soda jedhu kan qaban tahuu ibsan. Dabalataanis, ajjeechaa Gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii irratti raawwatame ilaalchisee mootummaan Sa’uudii qorannoo gahaa hin geggeessine jechuun komatan.
Odeeyfannoo wal qabateen, gareen ogeeyyota UN ajjeechaa Gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii qoraataa ture guyyaa kaleessaa gabaasa kan baase yoo tahu, ajjeechaan qonsilaa Istanbul keessatti raawwatame ajaja Muhammad Bin Salmaaniin tahuu ragaa kan argate tahuu ibse.